အသိပညာ Archives - Achawlaymyar
အိမ်မှု့ကိစ္စ လုံးဝမလုုပ်တတ်တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့သားလေးကို ထားသွားတဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီး မျက်ရည်လွယ်ရင် မဖတ်ပါနဲ့
January 11, 2022 by Achawlaymyar
အိမ်မှု့ကိစ္စ လုံးဝမလုုပ်တတ်တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့သားလေးကို ထားသွားတဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီး (မျက်ရည်လွယ်ရင် မဖတ်ပါနဲ့) မျက်ရည်လွယ်ရင် မဖတ်ပါနဲ့…. ကျွန်တော်ဇနီး သွေးကင်ဆာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဆီကနေ ထွက်ခွာသွားတာ ခုဆို (၃)နှစ် ကျော်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိတယ်အိမ်မှု့ကိစ္စလုံးဝမလုပ်တက်တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့သားလေးကိုထားခဲ့ရတာ သူဘယ်လောက်ထိ ဝမ်းနည်းနေမလဲဆိုတာ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း မိဘနှစ်ပါးစလုံးနေရာကနေကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမလို အားမရဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ရက်မှာ ကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ မနက်စောစောခရီးထွက်ဖို့ရှိတော့ ခလေးအတွက် ဘာမှမပြင်ဆင်ပေးရပဲအိမ်ကတန်းထွက်လာခဲ့တယ်။ မနေ့ညက ထမင်းကြမ်းနဲ့ ကြက်ဥကြော်ထားခဲ့ပေးပြီးအိပ်ရာကမနိုးသေးတဲ့ သားလေးကို ပြောပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်။ သားလေးကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လူတန်းစေ့ထားနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်လည်းအလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေရတယ်လေ။ အိမ်ပြန်မိုးချူပ်တဲ့တစ်ညမှာ ကျွန်တော်က သားလေးကိုလိုရင်းတိုရှင်းပဲ နူတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အလုပ်က ပင်ပန်းလာတဲ့အတွက်အင်္ကျီချွတ်ပြီး ကုတင်ပေါ် အရှိန်နဲ့ လဲပစ်ချလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ” ဗွန်းကနဲ “ဆိုသလို အနီရောင်ဟင်းရည်တွေခေါက်ဆွဲတွေက အိပ်ယာခင်းနဲ့စောင်တွေကိုတခဏအတွင်းမှာပဲ စွန်းပေကုန်တယ်။ … Read more
Categories အသိပညာ Leaveacomment
ကေလးေမြးၿပီးသြားတဲ့ မိန္းမက ဘယ္ေလာက္တန္သလဲဆိုတာ
ကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့ မိန်းမက ဘယ်လောက်တန်သလဲဆိုတာ ကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့ မိန်းမကဖတ်ကြည့်ပါ ဘယ်လောက်တန်သလဲ လောကကြီးမှာ မိန်းမတော်တော်များများက မိမိရင်သွေးလေးတွေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာဖို့အတွက်နဲ့ ကို ယ်ဝန်စဆောင်ချိန်ကစပြီး လုပ်နေကြလုပ်ငန်းတွေ ရပ်ပစ်လိုက်ရတယ် သန္ဓေသားအထိအခိုက်မရှိရအောင် (၉)လကျော်မျှ ဂရုတစိုက်စိုက်နဲ့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရင်း ခက်ခက်ခဲခဲ ပင်ပင်ပန်းပန်းနေထိုင်ရတယ်… ဒါပေမယ့် လူတော်တော်များများက အကောင်းမပြောကြဘူး… ခင်ပွန်းသည်တွေအပါအဝင်ပေါ့ အလုပ်လုပ်စရာမလိုဘဲအိမ်မှာကလေးထိန်းရင်း အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရတာကို ပင်ပန်းတယ်လား တဲ့ အိမ်သူဇနီးမယားတော်တော်များများ ကိုယ့်ယောကျာ်းစီက ဈေးဖိုးမရှိလို့ လက်ဖြန့်တောင်းရတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လောက် သိမ်ငယ်ရသလဲဆိုတာ ဘသူမှမခံစားတတ်ဘူး… မသိရင်ဘဲ ယောကျာ်းက တစ်အိမ်လုံးအတွက်ရှာကျွေးနေပြီး မိန်းမက ရသမျှပိုက်ဆံ အေးဆေးထိုင်ဖြုန်းနေတဲ့ပုံပဲ အိမ်အလုပ်လုပ်တာ ဝင်ငွေမရှိဘူးတဲ့လား အမေတစ်ယောက်ရဲ့ အလုပ်တာဝန်နဲ့ အလုပ်တန်ကြေးကို တွက်ပြပါရစေ အမေတစ်ယောက်ဆိုတာဖြစ်လာရင် အောက်ကအလုပ်တွေ စပြီးတာဝန်ယူရပြီ ၁) အိမ်အကူဈေးဝယ်၊ ဟင်းချက်၊ အဝတ်လျှော်၊ … Read more
“သင္တစ္လဝင္ေငြ ၁၀ သိန္းရွိတဲ့ခ်ိန္မွာ”… ေနာက္ဆုံးစာသားေလးကအသက္
January 3, 2022 by Achawlaymyar
သင်တစ်လဝင်ငွေ ၁၀ သိန်းရှိတဲ့ချိန်မှာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဝင်ထိုင်မိလို့ ၁/၂ သောင်းကုန်တဲ့ချိန်မှာ ဆိုင်ကဈေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ သင် Social Media ပေါ်မှာတင်ပြီးပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး သင်တစ်လဝင်ငွေ သိန်း ၁၀၀ ရှိတဲ့ချိန်မှာ LV brand ဝယ်သုံးတာကို အထူးအဆန်းမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး သင်တစ်လဝင်ငွေ သိန်း ၁၀၀၀ ရှိတဲ့ချိန်မှာ BMW ကားအကောင်းစားဝယ်စီးတာကို ပုံမှန်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပဲလို့ သင်မြင်ပါလိမ့်မယ် ဘယ်အရာမဆို Level ရှိပါတယ်။ လူ့ဘဝလဲတူတူပါပဲ ။ သဘာဝကိုက ခွဲခြားထားပြီးသားပါ။ Game ကစားရင်လဲ Level ရှိပါတယ်။ Rank လဲရှိပါတယ်။ အပေါ်ရောက်လေ လူတွေကအထင်ကြီးလေပါပဲ Game မှာတောင်မှ Level မြင့်ချင်ရင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှရပါတယ်။ ပုံမှန်သူတစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားက ဘယ်လောက်သွေးထွက်အောင်မှန်နေပါစေ လူတွေအလေးမပေးပါဘူး အောင်မြင်တဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကိုတော့ လူတိုင်းယုံကြည်လိုက်နာကြပါတယ်။ ဒီနေ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်ရင် သူ့ရဲ့အဆင့်အတန်းရှိပါတယ်။ … Read more
ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ သူရှိ ပြီးမှန်းသိရင်ဘယ်လောက် ပဲ သဘောကျနေပါစေ ဝေးဝေးကရှောင်ပါ
January 2, 2022 by Achawlaymyar
ပိုင်ရှင်ရှိရင် ရှောင်ပါသူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကို ပိုင်ရှင်မပေးပဲယူ ချင်စိတ်ရှိသူဟာ သူခိုးစိတ် ရှိတဲ့ သူပဲ။ ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုက်နေပါစေဘယ်လောက် ပဲ လိုချင်နေပါစေပိုင်ရှင်မပေးပဲ မယူရဘူး မထိရဘူး မကိုင်တွယ်ရဘူး ။ ယူမိတယ် ပြစ်မှားမိတယ်ဆိုရင် အဲ့တာဟာ ခိုးမှုမြောက်တာပဲ။တစ်ချို့ တွေက စည်း မထားကြဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ချင်းစာမှု မရှိကြဘူးပေါ့။ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့နဲ့စိတ်သာယာဖို့အတွက်နဲ့သူတစ်ပါး ရဲ့ ချစ်ခြင်းကို လုယူချင်တဲ့စိတ်ရှိကြတယ်။ ပိုင်ရှင် ရှိမှန်းသိရက်နဲ့သူငယ်ချင်း မို့ အရမ်းခင်တဲ့ မိတ်ဆွေမို့ပါ ဆိုပြီးလိုတာထက်ပိုပြီး အတင်းတွယ်ကပ်နေပြီး အခွင့်အရေး တွေယူနေတာဟာ သူတစ်ပါး ရဲ့ အချစ်တွေ ကို ခိုးယူချင်နေတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်တယ်။ သူ့ရဲ့အနားမှာ ပိုင်ရှင်ရှိတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ကတည်းကအပြင်မှာ လူချင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် online ပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ အပြောအဆို နဲ့ အမူအရာ တွေကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ပြောဆို ပြုမူသင့်တယ်။ … Read more
သားသမီးကို ခ်စ္ရင္ ခိုင္းပါ… “ခ်ီမထားနဲ႔ ခ်ိသြားမယ္”
December 30, 2021 by Achawlaymyar
သားသမီးကို ခ်စ္ရင္ ခိုင္းပါ… “ခ်ီမထားနဲ႔ ခ်ိသြားမယ္” မုန႔္အ႐ြယ္မွာ မုန႔္… ဒုတ္အ႐ြယ္မွာ ဒုတ္… အလုပ္အ႐ြယ္မွာ အလုပ္တဲ့…။ အမွန္ပဲ သားသမီးကို ခ်စ္ရင္ခိုင္းပါ။ေနရာတကာ လိုက္မလုပ္ေပးပါနဲ႔။ သူ႔အ႐ြယ္နဲ႔ တန္တဲ့ အလုပ္ေတြကို ခြဲတမ္းခ်ေပးပါ။ ပန္းကန္ေဆးခိုင္းပါ။ တံျမက္စည္း လွဲခိုင္းပါ။ အိပ္ယာ သိမ္းခိုင္းပါ။ ေရခဲေသတၱာထဲ ေရဘူးေတြျဖည့္ခိုင္းပါ။ အိမ္သာ ေဆးခိုင္းပါ။ အိမ္အကူရွိရင္လည္း တစ္ျခားသူလုပ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ခိုင္းပါ။ ဒီလိုလုပ္ခိုင္းတာဟာ ကေလးကို ခိုင္းတယ္လို႔ မျမင္ပါနဲ႔။ အလုပ္တစ္ခုကို သူလုပ္ႏိုင္တယ္ သူလုပ္ၿပီးသြားၿပီ။ သူလုပ္တတ္တယ္ဆိုတဲ့ ယုံၾကည္မႈကို တ‌ျဖည္းျဖည္းျခင္း တည္ေဆာက္ေပးတာပါ။ ကေလးကိုခ်စ္ရင္ ေနရာတကာလိုက္လုပ္မေပးပါနဲ႔… ခိုင္းပါ။ စလုပ္လုပ္ခ်င္းမွာေတာ့ အခ်ိဳးမေျပတာေတြ Concept မမိတာေတြ က်ကြဲတာေတြ မေသသပ္တာေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီအခ်က္ေတြဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္ … Read more
မြန်မာပြည်က အသက် (၆၀) ကျော် လူကြီးတွေ မဖြစ်မနေ ပြင်ရမယ့် အချက် (၅) ချက်
မြန်မာပြည်က အသက် (၆၀) ကျော် လူကြီးတွေ မဖြစ်မနေ ပြင်ရမယ့် အချက် (၅) ချက် (၁) ရှင်းပြတာကို နားမထောင်ခြင်း ဒါကတော့ တော်တော်များများလဲ ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ရှင်းပြတာကို နားထောင်လိုက်မှ တကယ့်အဖြစ်အပျက်အမှန်ကို သိပြီး အကြံကောင်း ဉာဏ်ကောင်းတွေပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်ပဲ ကိုယ်ထင်ရာပြောနေရင်တော့ စေတနာတွေက ဝေဒနာတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ (၂) မိမိမှားနေတာကို ဝန်မခံခြင်း အမှားကင်းတဲ့လူဆိုတာ ရှိကိုမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်မှားတာကို ဝန်မခံပဲ တစ်ဖက်သတ်ကြီးတွေပြောနေ လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်အရာကိုမှ အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ (၃) အခြေအမြစ်မရှိသော သတင်းများကို ယုံကြည်ခြင်း ရှင်းပြတာကိုသာ နားမထောင်ချင်တာ အခြေအမြစ်မရှိ ဘယ်သူပြောလို့ပြောမှန်းမသိတာတွေကို ယုံကြည်တဲ့သူတွေ တော်တော်များများတွေ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒီဟာက အတော်လေး အန္တရာယ်များပါတယ်။ (၄) ဆွေးနွေးရန် ဝန်လေးခြင်း ပြဿနာအသစ်တွေအတွက် … Read more
မိဘတွေ ဖုန်းကိုင်ပါများလာရင် သားသမီးတွေအပေါ် ရလာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုး (၅) ခု
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် လူတစ်ယောက်က တစ်နေ့ကို ၃ နာရီခန့် ဖုန်းအသုံးပြုပါတယ်။ နည်းပညာတွေက တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာတာကြောင့် ဖုန်းကို အချိန်ပေးတာများပြီး မိသားစုကို အချိန်ပေးတာ နည်းလာတယ်လို့ စိတ်ပညာရှင်တွေက ပြောကြပါတယ်။ မိဘတွေက ဖုန်းအတွက် အချိန်ပေးတာများပြီး ကလေးကို အချိန်ပေးတာ နည်းရင် ဘယ်လိုတွေ ခံစားလာရမလဲ ဆိုတာကို ပြောပြပေးပါမယ်နော်။ ၁။ ကလေးတွေရဲ့ လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေမှာ ပြဿနာရှိလာနိုင်ခြင်း မိဘတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှု ကင်းမဲ့ခြင်းဟာ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အားနည်းစေပြီးတော့ စိတ်ဓာတ်ကျစေပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အမှန်တကယ် ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်က သုတေသီတွေ ပြောကြားချက်အရ မိခင်စောင့်ရှောက်မှု အပြည့်အဝ မရတာဟာ ကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ် ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုတွေလည်း ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေဟာ … Read more
December 28, 2021 by Achawlaymyar
မိန္းမေတြဘဝကလည္းေယာက္်ားေတြထက္သားအိမ္တစ္လုံးအပိုပါတာနဲ႕ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးခံရဖက္ကခ်ည္းပဲေသြးသားဆႏၵရွိၾကလို႔အမႈတစ္ခုကိုအတူလြ န္က်ဴးၾကရင္ေတာင္ေနာက္ဆက္တြဲကသားအိမ္ရွိတဲ့မိန္းမဆီပဲခိုေအာင္းေတာ့တာ သားအိမ္ရွိေတာ့ကေလးကသူ႕ဆီပဲရွိရသူပဲကိုးလလုံးအေနရခက္အထိုင္ရခက္ ေဝဒနာကိုခံရေမြးေတာ့လဲသူပဲနာၾကင္ရအဲဒီ့သားအိမ္ေၾကာင့္ပဲPMS time မွာစိတ္ တိုတယ္ မီးတြင္းမွာ စိတ္က်တယ္ဒါေတြလဲခံရေသးတယ္ေမြးၿပီးလို႔ ဒီသားအိမ္ကထြက္သြားပါၿပီဆိုေတာ့လဲကေလးအတြက္အာဟာရကဖခင္ဆီကမထြက္ပဲ မိခင္ဆီကတဲ့။အဲဒါနဲ႕ပဲကေလးတာဝန္ကိုယူေလဦးတိုက္ေပဦးဒါေတာ့ ေလာကႀ ကီးကမတရားဘူးတကယ္ဆို ေယာက္်ားနဲ႕မိန္းမဟာ လိန္အဂၤါကြဲရင္ေတာ္ၿပီေပါ့တစ္ေယာက္ကသားအိမ္ရွိရင္တစ္ေယာက္ကနို႔ရည္ထြက္တဲ့ နို႔အုံရွိသင့္တယ္ခုေတာ့အဲဒါႏွစ္ခုကိုတစ္ဖက္တည္းပိုလိုက္တာနဲ႕ကေလးကအေမကိုမွ ပိုၿပီးတြယ္တာတယ္တို႔မိခင္အေနနဲ႕ကသားသမီးဆိုတာသူ႕ဝမ္းနဲ႕ လြယ္ေမြးရတာမို႔ဖခင္ထက္ပိုတယ္တို႔ျဖစ္လာေရာမိေအးဟာ၁၂၆ခါနာတာပဲမိန္းမျဖစ္လို႔ မိခင္ျဖစ္လို႔ဖခင္ကေဖာက္ျပန္ေနရင္ေတာင္ကေလးေတြမ်က္ႏွာငဲ့ရမ ယ္သည္းခံရမယ္ တို႔ျဖစ္လာေရာဖခင္ကမေဖာက္ျပန္ပဲ ေနလို႔မရဘူးလားမိခင္ ကေဖာက္ျပန္ရင္ေရာရလားတကယ္ဆိုဖခင္ေတြဖက္ကေနေၾသာ္ငါတို႔ထက္ပိုလို႔ကေလးေမြးျခင္းနဲ႕နို႔တိုက္ျခင္းလုပ္ေနရတဲ့မိန္းမသားေတြမို႔က် န္တာငါတို႔တာဝန္လို႔မ်ား ေတြးၿပီးငါတို႔ကပိုလို႔ေတာင္ထိန္းသိမ္းသင့္တာပိုလို႔ေတာင္အပင္ပန္း EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com ခံသင့္တာပိုလို႔ေတာင္ၾကင္နာသင့္တာလို႔မ်ား ေတြးရင္ဘာျဖစ္မွာမိုလို႔လဲေနာ္ၿပီးေတာ့လဲဒီသားအိမ္ထဲကကေလးညွစ္ခ်လိဳ႕ဒီတင္ပါးကအစိုင္အခဲေတြၿပိဳပ်က္သြားေတာ့ လဲသူတို႔ပဲညိုညင္တာဘယ္ႏွယ့္အဲဒါေၾကာင့္ကေလးလဲေမြးရပိုက္ဆံ လည္းရွာရအိမ္ရဲ႕လူမႈေရးကိစၥေတြပါစီမံရတဲ့မိခင္ေတြျမင္ရင္အရမ္းအသည္းနာသလိုခံစားရတာၿပီးေတာ့ကေလးေသးစိုလို႔မွထမလဲေပးပဲအိမ္ဦးခ န္းမွာသတင္းစာအခန့္သားဖတ္ေနတဲ့ ေယာက္်ားကိုအဲဒီလိုစြယ္စုံရမိန္းမက သားသမီး မ်က္ႏွာငဲ့ၿပီးသည္းခံရတယ္ဆိုရင္အသဲေပါက္တာအဲသေလာက္သည္းခံတဲ့မိန္းမကိုပစ္ၿပီးေကတီဗီကမိန္းကေလးကိုမွသာယာတဲ့ေယာက္်ားဆိုရင္႐ြံပါ႐ြံတာေ ယာက္်ားနဲ႕မိန္းမဟာတန္းတူပါဆိုေပမယ့္လဲသားအိမ္နဲ႕နို႔ေၾကာင့္တာဝန္၂ခု ကေတာ့မိန္းမမွာအလိုလိုပိုၿပီးသားဒါကိုအလြန္တစ္ရာဘုန္းကႀကီးလြန္းတဲ့ ေယာက္်ားမ်ားကငဲ့ညွာေထာက္ထားျခင္းအားျဖင့္သစၥာရွိရွိနဲ႕လူပီသျပရမွာမ ဟုတ္ဘူးလားအခုေတာ့ဘာတဲ့။ ေယာက္်ားေတြက … Read more
အောင်မြင် ဖို့ အတွက် ဘွဲ့ ရစရာမလိုတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၇) ချက်
December 26, 2021 by Achawlaymyar
စာသင်ခန်း ထဲမှာထက် အပြင်ဘဝက သင့်ကို ပိုသင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။ ၁ – ကျွမ်းကျင်မှု နဲ့ အရည်အသွေး အလုပ်အကိုင် ရရှိမှုဟာ ကျွမ်းကျင်မှု နဲ့ အရည်အသွေး ကို မူတည်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒီအချက်တွေပေါ်မှာပဲ မူတည်တာပါ။ တက္ကသိုလ် တွေဟာ ပညာရေး အတွက် ကောင်းတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပေမဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးနိုင်တဲ့ နေရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂ – ဘွဲ့ မရသူ ဘွဲ့ မရ ရင် အောင်မြင် နိုင်တယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘွဲ့မရ ဘဲနဲ့လည်း အောင်မြင်မှု ကို ရယူနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ စတိဗ်ဂျော့၊ ဟင်နရီဖို့ဒ်၊ စတီဗင်စပီးဘာ့ဂျ် စတဲ့သူတွေဟာ တက္ကသိုလ် က … Read more
December 25, 2021 by Achawlaymyar
အဝင်ကောမရှိတော့တဲ့သားဖုန်းလေး (မျက်ရည်ခိုင်မှဖတ်ပါ) အသက်မဲ့နေသောဖုန်းအဖိုးအိုတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ကီးပက်ဖုန်းလေးကိုဖုန်းပြင်တဲ့ဆိုင်မှာ သွားပြတယပြင်ပေးတဲ့သူကစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပြီးဒီဖုန်းကကောင်းပါတယ်ဘာမှမပျက်စီးသေးဘူးခေါ်လို့လည်းရပါတယ် အဖိုးမျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်အပြည့်နဲ့ဒါဆိုအဖိုးရဲ့သားသမီးတွေက ဘာကြောင့်ဒီဖုန်းလေးကိုမခေါ်ကြတာလည်းလူလေးရယ်မိဘတွေလိုချင် တာငွေမဟုတ်ပါဘူးသိတတ်မှု့ပါမိဘတွေလိုချင်တာရွှေမဟုတ်ပါဘူး ဂရုစိုက်မှု့ပါသား,သမီးတိုင်းမိဘကျေးဇူးဆပ်နိုင်ကြပါစေ အသက်မဲ့နေသောဖုန်းအဖိုးအိုတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ကီးပက်ဖုန်းလေးကို ဖုန်းပြင်တဲ့ဆိုင်မှာသွားပြတယပြင်ပေးတဲ့သူကစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပြီး ဒီဖုန်းကကောင်းပါတယ်ဘာမှမပျက်စီးသေးဘူးခေါ်လို့လည်းရပါတယ် အဖိုးမျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်အပြည့်နဲ့ဒါဆိုအဖိုးရဲ့သားသမီးတွေကဘာကြောင့် ဒီဖုန်းလေးကိုမခေါ်ကြတာလည်းလူလေးရယ်မိဘတွေလိုချငတာငွေမဟုတ်ပါဘူး သိတတ်မှု့ပါမိဘတွေလိုချင်တာရွှေမဟုတ်ပါဘူးဂရုစိုက်မှု့ပါသား,သမီးတိုင်းမိဘကျေးဇူးဆပ်နိုင်ကြပါစေ CREDIT အဝင္ေကာမရွိေတာ့တဲ့သားဖုန္းေလး (မ်က္ရည္ခိုင္မွဖတ္ပါ) အသက္မဲ့ေနေသာဖုန္းအဖိုးအိုတစ္ေယာက္ကသူ႔ရဲ႕ကီးပက္ဖုန္းေလးကိုဖုန္းျပင္တဲ့ဆိုင္မွာ သြားျပတယျပင္ေပးတဲ့သူကစစ္ေဆးၾကည့္လိုက္ၿပီးဒီဖုန္းကေကာင္းပါတယ္ဘာမွမပ်က္စီးေသးဘူးေခၚလို႔လည္းရပါတယ္ အဖိုးမ်က္လုံးထဲမွာမ်က္ရည္အျပည့္နဲ႔ဒါဆိုအဖိုးရဲ႕သားသမီးေတြက ဘာေၾကာင့္ဒီဖုန္းေလးကိုမေခၚၾကတာလည္းလူေလးရယ္မိဘေတြလိုခ်င္ တာေငြမဟုတ္ပါဘူးသိတတ္မႈ႕ပါမိဘေတြလိုခ်င္တာေ႐ႊမဟုတ္ပါဘူး ဂ႐ုစိုက္မႈ႕ပါသား,သမီးတိုင္းမိဘေက်းဇူးဆပ္ႏိုင္ၾကပါေစ အသက္မဲ့ေနေသာဖုန္းအဖိုးအိုတစ္ေယာက္ကသူ႔ရဲ႕ကီးပက္ဖုန္းေလးကို ဖုန္းျပင္တဲ့ဆိုင္မွာသြားျပတယျပင္ေပးတဲ့သူကစစ္ေဆးၾကည့္လိုက္ၿပီး ဒီဖုန္းကေကာင္းပါတယ္ဘာမွမပ်က္စီးေသးဘူးေခၚလို႔လည္းရပါတယ္ အဖိုးမ်က္လုံးထဲမွာမ်က္ရည္အျပည့္နဲ႔ဒါဆိုအဖိုးရဲ႕သားသမီးေတြကဘာေၾကာင့္ ဒီဖုန္းေလးကိုမေခၚၾကတာလည္းလူေလးရယ္မိဘေတြလိုခ်ငတာေငြမဟုတ္ပါဘူး သိတတ္မႈ႕ပါမိဘေတြလိုခ်င္တာေ႐ႊမဟုတ္ပါဘူးဂ႐ုစိုက္မႈ႕ပါသား,သမီးတိုင္းမိဘေက်းဇူးဆပ္ႏိုင္ၾကပါေစ CREDIT